Ciidamada Puntland oo la wareegay goobo badan & Jawiga saaka oo ka duwan sidiisii hore kadib dagaalkii…. – Puntlandtimes
Ciidamada Puntland oo la wareegay goobo badan & Jawiga saaka oo ka duwan sidiisii hore kadib dagaalkii….
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee soo gaadhay Warsidaha Puntlandtimes.com ayaa sheegaya in xaalada goobihii lagu dagaalamay maalintii shalay ahayd ee duleedka magaalada Galkacyo ay saaka dagan tahay.
Dhulalkii shalay ay ku dagaalameen labada malayshiya beeleed ayaa waxa xilligan ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa amaanka Puntland oo la kala dhex dhigay labadaasi dhinac si loo qaboojiyo dagaalka isla markaasna dagaal mar kale uga dhicin halkaasi.
Odayaasha dhaqanka, waxgaradka magaalada Galkacyo iyo maamulka gobolka Mudug ayaa dadaal dheeraad ah ugu jira sidii loo soo af meeri lahaa xiisadaasi, waxaana lagu wadaa in labada dhinac lala yeesho wada xaajood dhab ah lana isku keeno.
Inta la xaqiijiyey 6 ruux oo kamid ah dhinacyadii dagaalamay ayaa ku dhinteen halka tiro intaas ka badana ay dhaawacyo kala duwan kasoo gaadheen dagaalkii shalay ka dhacay duleedka magaalada Gaalkacyo ee u dhaxeeyey laba malayshiya beeleed oo kuwada dagaalamay dhulal ku yaala duleedka Gallkacyo.
Taliyaha qaybta Booliska gobolka Mudug oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada xasilinta iyo kuwa Daraawiishta Puntland ay ka kala dhex dhigeen labada dhinac isla markaasna xal laga gaadhi doono xiisadaha ka taagan deegaanka iyo dagaalkii shalay ka dhacay duleedka magaalada Gaalkacyo.
Dhanka kale gudoomiye ku xigeenka koowaad ee gobalka Mudug Cabadulaahi Faarax Gulled iyo gudoomiye ku xigeenka labaad Maxamed Cumar Af Dhuub la hadlay Radio Gaalkacyo ayaa faah faahin ka bixiye qaabka uu ku bilowmay dagalkaasi iyo khasaaraha ka dhashay, iyagoona sheegay in dhinacyada ku dagaalamay deegaankaasi ay haatan ciidamo kala dhex dhigeen.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in isimadda dhaqanka iyo waxgaradku ay ku hawlan yihiin xal ka gaadhida dagaalkaasi is qab qabsiga dhuleed ee ka jira goobta dagaalkaasi ka dhacay.
Sida muqanaysa puntland waxa ka jira burbur & habacsanan bahsan,sida aad ogtihin puntland waxay cagta sartay wado khatr badan dhanka amanka nolasha bulshada,waxad arkeysan ama maqaleysan,kufisi si xawli ah kusocda oo aan waxba laga qabanan,waxad arkeysan Dagalka lagu hoobtay oo ka dhacaya magalada galkacyo oo dhulka iaysku layey oo aan waxba laga qabanan sida meel aan xukumad lahan oo kale umuqata,waxad arkeysa kufisigii & Dilkii logeystay gabadhii yarey oo 12 jirka ahayd in shekadedi hoos lodhigay,taas oo kentay 6 in isku dhintan kuwo badan oo kale in aay dhac yihin tasi waxay markhati katahay burburka fosha xun oo puntland kusocoto,werarka somaliland ku hayso qaybo kamid ah puntland ku qabsatay & Sarakisha puntland oo shaqada iska casilay waxas oo dhan waxay mujinayan wadad halaga ah oo puntland afkasaratay,mana aay laha hogamiye ka samatabixin kara mushkulada cusb ee aay luga lasha gashay.